Cristiano Ronaldo oo furaya xarun Timaha loogu abuuro dadka Bidaarta leh iyo Gacalisadiisa oo… – Gool FM
Arturo Vidal oo gaaray dalka Talyaaniga isagoo ku dhow inuu dhammaystiro ku biiristiisa Kooxda Inter
Horudhac: Wolverhampton Wanderers vs Manchester City… (Sky Blue oo doonaysa inay caawa guul ku furato horyaalka Premier League)
Kooxaha Real Sociedad iyo Real Madrid oo barbaro ku kala baxay… +SAWIRRO
Cristiano Ronaldo oo furaya xarun Timaha loogu abuuro dadka Bidaarta leh iyo Gacalisadiisa oo…
Haaruun February 26, 2019
(Madrid) 26 Feb 2019. Xidigga kooxda Juventus iyo xulka Bortuqiiska Cristiano Ronaldo ayaa xarun aad loo qalabeeyay oo malaayiin dollarna ay ku baxday oo dadka bidaarta leh loogu abuurayo Timo ayaa waxa uu ka furanayaa magaallada Madrid ee caasimadda Spain.
Muddo dheer ayaa la sheegayaa in Ronaldo ay qorshaha ugu jirtay in uu xarun nuucaan oo kale ah furo, iyadoo xaruntan uu madax uga dhigi doono saaxiibtiisa Georgina Rodriguez.
Xaruntan ayaa xarigga laga jari doonaa 18 bisha soo socota ee Maarso, waxaana warbixintu sheegeysaa in ay ka shaqeyn doonaan 150 qofood oo ku takhasusay howlaha tima abuuridda, iyadoo halkaana lagu diyaariyay 18 qol oo markiiba 18 qofood timaha loogu abuuri karo.
Qiimaha aad xarunta cusub ee Cristiano Ronaldo timaha uga abuuran karto ayaa ku kacaya 4;600 oo dollar.
Warbixin uu soo saaray CR7 ayaa waxa uu yiri “marka laga soo tago kubadda cagta, waxaan xiiseeyaa caafimaadka, Tiknoolojiga iyo daraasadaha, waana meelaha aan doonayay in aan maal gashado”.
Ronaldo oo soo xaadiri doona xafladda furitaanka xarutiisan cusub ee dadka timaha loogu abuuri doono ayaa waxa uu yiri “waxaan haynaa aqoontii, inaad meelka baxsan Bortuqiiska ka furato xarun caafimaadna waxaan u baahannahay sumcad”.
qalabeyn casri oo lagu sameeyay xarunta cusub ee caafimaadka ee Cristiano Ronaldo
Juan Mata oo qarka u saaran in uu qandaraaska u cusbooneysiiyo kooxdiisa Manchester United
Xiddiga ugu fiican Taariikhda kubbada cagta, Daaficii ugu adkaa uu wajahay & Griezmann oo dhowr arimood ka hadlay